umshini wekhekhe we-selfie ikhofi China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta yekhofi echithiwe,I-Selfie Coffee Machine Yokudayiswa,Foam Maker Ikhofi
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > Iphrinta ye-Cake > umshini wekhekhe we-selfie ikhofi
I-Model No.: A3
Kungakhathaliseki ukuthi usuku lokuzalwa olujabulisayo noma Ngiyakuthanda, amakhasimende angakha imiklamo yawo siqu ngokwabo kanye nabangane bawo ngephrinta yekhofi echithekile , futhi bangathumela umyalezo omusha ngekhofi yabo, i-Milkshakes, ama-biscuits, ama-macaroons, ama-paster angempela.
Ngomshini wethu wekhofi we-selfie wokuthengisa ungaphrinta kwikhofi uphinde uphendule ikhofi yakho yomenzi wobuciko , ama-milkshakes, ama-biscuits, ama-pastries, ama-macaroons nezinye izinto eziningi ezenzakalweni ezingavamile. Yenza i-owm yakho design, isithombe, i-Emoji, Imilayezo kukhofi yakho oyintandokazi, u-milkshakes, ama-Macroons, ama-Biscuites, amaqebelengwane, i-Chocolate ETC.Usebenzisa ubuchwepheshe bokunyathelisa obunikazi bomshini umshini wenza ukunyathelisa okuphefumulelwe kunoma yisiphi isithombe noma umbhalo odwebeni lwesiphuzo sekhofi. Yakha isikhashana futhi uhlanganise uxhumano namakhasimende akho.
Yenza ikhofi yokuphuza i-foam isiphuzo ngezindlela zakho ezivamile. Beka indebe kumshini wekhekhe we- selfie ikhofi ukudayiswa , ukhethe isithombe kusuka kulabhulali yokuqukethwe eningi noma uvumele amakhasimende akho aklanywe ukuklama. Umshini wakho uzongena kumasekhondi nje. Nika isiphuzo sakho ngokuthinta okuphelele.
umshini wekhofi odweba izithombe Xhumana Nanje
Thenga iphrinta yomenzi we-ripple Xhumana Nanje
Iphrinta yekhofi echithiwe I-Selfie Coffee Machine Yokudayiswa Foam Maker Ikhofi Iphrinta yekhofi nge-Wifi Iphrinta yekhadi lephini Iphrinta yekhofi Isithombe Dgt Iphrinta ephansi eshibhile Iphrinta ye-Konica UV ephrintiwe